Bit By Bit - Running kuedza - 4.5.1.3 Vakira yako chigadzirwa
Kuvaka kwako chigadzirwa ndiye ane ngozi, mukuru-mubayiro. Asi, kana mabasa, unogona kubatsirwa pane nyaya dzinovaka Kutenderera kwacho kwakapiwa kuti inogonesa nevamwe tsvakurudzo.
Kutora kusvika yokuvaka kwako kuedza imwe nhano, vamwe vatsvakurudzi chaizvoizvo kuvaka zvigadzirwa zvavo. zvigadzirwa izvi zvinokwezva vechikamu uye ipapo vashumire platforms kuti kuedza nedzimwe mhando tsvakurudzo. Somuenzaniso, boka vaongorori paUniversity Minnesota akasika MovieLens , iyo inopa akasununguka, non-yezvokutengeserana munhu zvichienderana kufirimu munzwewo. MovieLens ave vakavhiyiwa kubvira 1997, uye panguva iyi 250,000 vakanyorwa vanoshandisa zvakapa ratings anopfuura mamiriyoni 20 pamusoro anopfuura 30.000 mafirimu (Harper and Konstan 2015) . MovieLens rakashandisa yezviri nenzanga vanoshandisa kuitisa kutsvakurudza chaizvo kubvira muchizviedza pasocial dzidziso sayenzi pamusoro mipiro paruzhinji zvinhu (Beenen et al. 2004; Cosley et al. 2005; Chen et al. 2010; Ren et al. 2012) Kugadzirisa algorithmic matambudziko dzokurumbidza gadziriro (Rashid et al. 2002; Drenner et al. 2006; Harper, Sen, and Frankowski 2007; Ekstrand et al. 2015) ; nokuti azere ongororo ona Harper and Konstan (2015) . Vakawanda kuedza izvi zvaisazova zvichikwanisika pasina vaongorori vane kudzora zvizere chaicho kushanda chigadzirwa.
Zvinosuruvarisa kuvaka kwenyu chigadzirwa hahusi zvakaoma, uye iwe unofanira pafunge zvakafanana pakusika nemavambo-up kambani: ine ngozi, mukuru-mubayiro. Kana zviri kubudirira, nzira iyi inopa zvizhinji kudzora kunobva kuvaka kwenyu kuedza pamwe realism uye vatori vechikamu kuti zvinobva kushanda yaivapo hurongwa. Uyezve, nzira iyi dzingadai kukwanisa kuumba nyaya dzinovaka Kutenderera kwacho kwakapiwa apo mamwe kutsvakurudza kunotungamirira nani chigadzirwa inotungamira kuna mamwe vanoshandisa zvinoita kuti mamwe vatsvakurudzi uye zvichingodaro (Figure 4.15). Nemamwe mashoko, kamwechete nyaya dzinovaka Kutenderera kwacho kwakapiwa kubanha mukati, tsvakurudzo vanofanira kuwana nyore. Pasinei zvinogona chidiki kusvika ichi, handigoni kuwana zvimwe mienzaniso kubudirira, izvo zvinoratidza chete zvakaoma sei kuuraya zvinobudirira. Asi, tariro yangu iri kuti nzira iyi achava zvakawanda anoshanda sezvo zvemichina zvakunowedzera. Zvinetso izvi nokusika kwako chigadzirwa kunoreva kuti vanotsvakurudza vanoda kudzora chigadzirwa vanowanzoguma kuti mudiwa ane kambani, musoro wenyaya Ndichakupfuurai vanaani.
Akasabvumirana 4.15: Kana iwe unogona kubudirira kuvaka yako chigadzirwa, unogona kubatsirwa kubva nyaya dzinovaka Kutenderera kwacho kwakapiwa: kutsvakurudza kunotungamirira nani chigadzirwa inotungamira kuna mamwe vanoshandisa inotungamira kuna zvakatowanda tsvakurudzo. Kupira uku nyaya dzinovaka zvishwe vari chinopa zvakaoma kusika, asi vanogona vakwanise tsvakurudzo kuti aisazova zvinogoneka kudaro. MovieLens muenzaniso imwe tsvakurudzo chirongwa ane kubudirira mukusika munhu nyaya dzinovaka Kutenderera kwacho kwakapiwa (Harper and Konstan 2015) .